“Dilka culimada iyo weerarrada masaajiddu waa masiibo ugub ah oo ku soo korartay Puntland” Gen. Khayr – Radio Daljir
“Dilka culimada iyo weerarrada masaajiddu waa masiibo ugub ah oo ku soo korartay Puntland” Gen. Khayr
Garowe Apr, 17 – Dawladda Puntland ayaa masiibo ugub ah ku tilmaantay dhacdooyinkii taxanaha ahaa ee shalay ilaa saaka ka socday magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug, kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen weerarro dad ku dhinteen oo lagu qaaday labo masjid, kana dhashay dilkii sheikh caan ahaa oo shalay ka dhacay magaaladaasi.
Wasiirka ammaanka ee Puntland Yuusuf Axmed Khayr oo maanta shir jaraa?id ku qabtay xafiiskiisa magaalada Garoowe ayaa sheegay in waxa Galkacyo ka socda ay yihiin fidno aan la yaraysan karin ayna tahay in loo istaago shacab iyo dawladba sidii looga hortagi lahaa.
?Waa masiibo ugub ah oo ku soo korartay deegaanada Puntland dilalka culimada iyo weerarrada masaajiddu ee waa inay shacabku is dajiyaan una toog-hayaan dhibaatooyinka noocaah ah? ayuu yiri wasiirku, waxaana hadalka Yuusuf Axmed Khayr imaanaya iyadoo uu shalay duqa degmada Galkacyo Cabdiraxaman Maxamuud X. Xasan sheegay inay adag tahay waxka-qabashada Galkacyo.
Rag hubaysan ayaa saaka weearay masaajidka Faaruuq oo ku yaalla galbeedka Galkacyo waxayna halkaas ku dileen hal qof labo kalana way dhaawaceen, waxaana taas ka horraysay weerar lagu qaaday masjidka Salaaxu-diin oo ku yaalla xaafadda Garsoor ee Galkacyo oo isna lagu dilay sedex qof siddeed kalana lagu dhaawacay.
Rabshadaha Galkacyo ayaa bilayday ka dib markii shalay (Sabti) duhurkii qarax lagu dilay Sheekh Ismaaciil Xaashi Xuseen oo ahaa Agaasimihii Guud ee Wasaaradda Awqaafta ee Puntland.